Iindaba -Izambatho zeLaphu zeMpahla zoNyango oluQhelekileyo
Kukho iileya ezi-2 kule nto yonyango lwe-TPU.
Eyokuqala ilaphu elisisiseko. Yindwangu engalukanga.
Umaleko ongezantsi kwifilimu ye-TPU. Yenza indwangu ukuba inganiki umoya kwaye ingabi manzi.
Umaleko we-TPU othambileyo nobhetyebhetye unokonyusa ukugqabhuka kunye nobuthathaka bempahla yelaphu.
1) I-Anti-bacterial kunye nokungahambisi ityhefu
2) Umoya obalaseleyo wokungena kwiimveliso ezinokubanjiswa ngamaxabiso aphezulu
4) Ukuncipha kwamaqondo asezantsi asezantsi, kungasetyenziselwa phantsi ko -22 ° c
I-5) Inobuhlobo kokusingqongileyo kwaye ingekho-ityhefu, inokugqitywa yi-microorganism kwisithuba seminyaka emi-3-5 xa kungcwatywa.
I-6) Ukuthamba kunye nokuziva kuthambile kwesandla
1) Ukuba umtsha kweli candelo, singakunika iingcebiso zobungcali ngokusekelwe kwiminyaka engama-15 yamava. Ngaphezu koko, singacebisa ukuba kufumaneke umgangatho ophezulu kunye nabavelisi boomatshini kuwe.
2) Ukucaciswa kunokwenziwa ngokweemfuno zabathengi, kubandakanywa nelaphu elisisiseko, umbala wento esisiseko, ubukhulu bayo, ubukhulu kunye nombala wefilimu ye-TPU, ububanzi kunye nokupakishwa.
I-3) I-odolo yesampulu kunye ne-oda elincinci zamkelekile
I-4) Iisampulu zasimahla zinokuthunyelwa kuwe ukuba zitshekishe umgangatho, kodwa kuya kufuneka uhlawule imali yokuposa
inkampani yethu njengemveliso yeNdawo yoNyango, ukuba ufuna oko pls qhagamshelana nathi.